Guddiga Doorashada oo Shahaadooyinkii u diiday Xildhibaano fara badan iyo Muran cusub oo ka dhashay – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Guddiga Doorashada oo Shahaadooyinkii u diiday Xildhibaano fara badan iyo Muran cusub oo ka dhashay
Guddiga Doorashada Dadban ee heer federaal ayaa la yimid qorshe aqoonsiga xildhibaannnimo loogu diiday xildhibaano la sheegay inay dacwad ka taagan tahay kuraastooda.
Qoraal ka soo baxay Guddiga ayaa lagu sheegay in Guddigu bilaabay bixinta shahaadda xildhibaanada la doortay, iyadoo la siinayo xildhibaanada aanay wax dacwad ah ka oolin Guddiga ee kuraastooda aan la isku heysan.
Qaar ka mida xildhibaanada oo hore Muqdisho u yimid inay helaan Shahaadooyinkooda ayaa loogu diiday in dacwad ka jirto kuraastooda, arrintaas oo keenay in xildhibaano badan ay welwel ka muujiyaan in guddigu arrintan u adeegsado musuq iyo in xildhibaano la doortay lagu adkeeyo shahaadada si dhaqaale looga qaato.
Xildhibaanada liiska ku jira ee aan la siin doonin Shahaadooyinka ayaa tiradooda lagu sheegay in ka badan 20 xildhibaan, waxaana arrintan faragelin ku haya maamul goboleedyada iyo Madaxtooyada Soomaaliya.
Previous: AMISOM says foiled attack on its convoy in Somalia
Next: Hooyada Sideed Caruur ah oo inta la dilay maydkeeda la qariyey oo la helay